China abụọ-akụrụngwa osisi mama factory na suppliers | .BỌCH.
1. Ihe: site na isi gị n'ụlọnga na-agwọ ọrịa gị n'ụlọnga ruru.
2. Ọdịdị: milky ọcha mmiri.
3. Adabara ntuziaka daub, ike stickability, elu arụmọrụ, adaba na-ewu.
4. Ngwa: A na-ejikarị ya eme ihe na ibo ụzọ osisi siri ike na Windows, arịa ụlọ osisi siri ike, osisi osisi siri ike, mbadamba osisi siri ike, mbadamba osisi, njikọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ.
Nkọwa: 1L 、 5KG 、 10KG 、 25KG 、 50KG
Mpụga agba: Isi ihe (Ivory) Hardener (ọkụ aja aja)
Ihe siri ike: Isi ụlọ ọrụ （≥50%） Ihe siri ike （≥99%）
(1) Pretreatment: isi ihe leveling, gluu, dị ka nkezi nke isi gị n'ụlọnga (milky ọcha) na-agwọkwa gị n'ụlọnga (ọchịchịrị aja aja) 10: 1. Rịọkwa gluu evenly, na mbuaha mama kwesịrị iji n'ime 30 ~ Nkeji 60.
(2) sizing: sizing kwesịrị mezue na 1 nkeji, ákwà mama bụ edo na ọgwụgwụ ákwà mama kwesịrị zuru ezu.
(3) mejupụtara: oge ​​nrụgide iji zuru ezu, efere a na-ekpuchi na 1 nkeji, nkeji 3 ga-agbanye, oge mgbali 45 ~ 120 nkeji, osisi siri ike pụrụ iche 2 ~ 4. Ike nrụgide ga-ezuru, okwuchi 500 ~ 1000kg / m2 , osisi siri ike 800 ~ 15000kg / m2.
(4) Ọgwụgwọ: mgbe mgbatị mgbatị iji debe ahụike, ọnọdụ ahụike dị elu karịa 20 ℃, awa iri abụọ na anọ nwere ike ịhazi ya (hụrụ, planer), awa iri asaa na asaa ka nhazi miri emi, n'oge ahụ iji zere ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo.
Aha aha: plywood nrapado abuo
Ofdị PVAC - PB
Na mputa na-acha ọcha na-acha ọcha
Oge ọgwụgwọ 2-4 awa
aha ngwaahịa Abụọ-mbadamba osisi mama Aha akara desay
pịnye PVAC-PB Viscosity（MPA.S) 5000-8000
Nkọwa 1L、5KG、10KG、25KG、50KG PH 5-6
Agba dị na mpụga Isi ihe (Ivory) Hardener (ọkụ aja aja) Oge ọgwụgwọ 2-4h
Ihe siri ike Isi gị n'ụlọnga（≥50%）Ihe siri ike（≥99%） Adị ndụ Ọnwa iri na abụọ
2, Magburu onwe mmiri na-eguzogide
3 、 Anụ na okike
Okwesiri ka jigsaw bonding nke ihe ndi na-abughi ihe ndi ozo na ihe ndi ozo.
1, Pretreatment: The mmiri ọdịnaya nke osisi a ga-achịkwa n'etiti 8-12%; bonding isi elu kwesịrị ezigbo onye na ewepụghị, enweghị warpage, ájá, mmanụ, wdg
2, Sizing: isi gị n'ụlọnga: na-agwọ ọrịa gị n'ụlọnga (10: 1) ruru agwakọta agwakọta kwesịrị n'ụzọ zuru ezu nwuo maka 3-5 nkeji, ruo mgbe edo. Mgbe edozi gluu, ekwesịrị iji ya mee ihe n'ime awa 1-2. Afọ na mmụba olu nwere ike ime n'oge eji eme ihe, nke bụ ihe nkịtị. You nwere ike ịga n'ihu iji mgbe obere edemede.
3, Ngwọta: Oge ịpị bụkarị awa 2-4, dabere na ọnọdụ okpomọkụ
na iru mmiri nke gburugburu ebe obibi.
1.Base ihe nhazi ọkwa bụ isi:
Flatness Standard: ± 0.1mm Mmiri ọdịnaya ọkọlọtọ: 8% -12%;
2. Ọnụ nke gluu dị ezigbo mkpa:
Isi ihe na-acha ọcha (ọcha) na ihe na-agwọ mmadụ (aja aja aja) agwakọtara na nha nke 100: 10 dịka usoro kwekọrọ;
3. Kpoo gluu nke oma:
Jiri onye na - eme ihe iji bulie colloid ugboro 3-5, na - enweghị mmiri mmiri na - acha odo odo. Ngwakọta ngwakọta agwakọta kwesịrị iji n'ime 30-60 nkeji;
4. Na mama ngwa ngwa bụ ngwa ngwa na ezi:
Kwesịrị itinye ngwugwu gluu n'ime 1 nkeji. Ntucha kwesịrị ịdị n'otu na gluu na njedebe kwesịrị ezu.
5.Pressure oge kwesịrị ezu
A na-eme ka mbadamba ndị a na-ekpuchi ekpuchi ọnụ n'ime oge 1, a ghaghị ịpị ha n'ime minit 3. Oge ịpị ahụ bụ nkeji 45-120, osisi siri ike bụ awa 2-4;
6, nrụgide ahụ ga-ezu:
Pressure: softwood 500-1000kg / ㎡ hardwood 800-15000kg / ㎡;
7, mgbe decompression iji nọgide na-enwe ahụ ike:
Ọnọdụ ahụike dị elu karịa 20 Celsius C, enwere ike iji ya rụọ ọrụ (hụrụ, planed) n'ime awa 24, enwere ike ịga n'ihu na 72 awa. Zere ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo n'oge ahụ;
Nke gara aga: Polyurethane nrapado mama
Osote: Terpene pinene resin mama ihe
elu mma osisi gluu
S168 Silicone Sealant Weather na-eguzogide Adhesiv ...